Iifonti zabantwana ezibalulekileyo | Abadali be-Intanethi
Iifonti zabantwana ezibalulekileyo
Iris Gamen | 06/05/2022 23:00 | Ezahlukeneyo
Kwisithuba sanamhlanje, siza kwenza a ukuqulunqwa kweefonti zabantwana ezifanelekileyo kuyilo lwalo mxholo. Ukuba uneprojekthi yoyilo esandleni okanye uza kwenza into ehambelana neyona incinci yendlu, ngokuqinisekileyo ufuna iireferensi kwiifonti zokuchwetheza ezigxile kolu luntu.
Mhlawumbi, uye waqonda ukuba ukukhangela i-typography echanekileyo ukufezekisa uyilo lwabantwana kunokuba nzima. Kukho iifonti ezininzi ezikhoyo kwaye kunokuba nzima ukufumana eyona iqinisekileyo oko kuya kunika uyilo lwakho uchuku lokugqibela.
Iifonti zabantwana oya kuzifumana kwicandelo elilandelayo ziya kusebenza ngokuchanekileyo kulo naluphi na uhlobo lweprojekthi osebenza kuyo okanye oza kusebenza kuyo. Qhuba phakathi kweefonti ezahlukeneyo esikukhethele zona, khuphela, zama kwaye wenze.
1 Iifonti zabantwana ezibalulekileyo
1.1 Zoo Alfabhethi
1.3 Mama ibhere
1.4 UGraham Cracker
1.5 Iqela lePhepha
1.7 Jelly Donuts
1.8 inkwenkwe yerokhethi
1.9 Iimvakalelo zokubamba
1.11 Amabali entsomi amnandi
1.12 Chirrup Typeface
Jonga kuyo yonke le mizekelo sikuphathele yona kweli candelo kwiifonti zabantwana. Khetha eyona ifanele iimfuno zakho kwaye uthathe uyilo lwakho uye kwelinye inqanaba, uhlala uhlonipha ubuhle bomntwana.
Kule ndawo yokuqala sikuzisa a amazwi aphefumlelweyo zizilwanyana zoo, nto leyo eyenza abalinganiswa bakhe babe bahle kwaye bahlekise. Unobumba ngamnye umele uhlobo olwahlukileyo lwesilwanyana, nto leyo eyenza kube nzima ukuba ungafuni ukusebenzisa bonke oonobumba bealfabhethi.
Isebenza kakuhle kuyilo olunobuhle bomntwana njengamakhadi omhla wokuzalwa, izikipa, oobhaka, iileyibhile ezilungiselelwe wena, njl.
Omnye umthombo ongaqondakaliyo nomoya owoyikekayo ilungele imibhiyozo enxulumene neHalloween, apho ukoyikisa abancinci. Ungayisebenzisa kumakhadi, izimemo zepati, iipowusta, i-t-shirts, njl.
iflebhu, ibandakanya oonobumba abakhulu kuphela isiLatini, amanani, iziphumlisi kunye ne-icon ye-monster ye-monster emihlanu ukugqibezela uyilo lwakho.
Ngaba ngokusekelwe kwiibhere ezihlala ehlathini, luhlobo lokubhala oludibanisa inkalo emnandi neyonwabisayo phakathi koonobumba bayo. Ifonti yesikweri, kodwa igcwele iinkcukacha ezinika isiphumo sobuntwana kunye nesithandekayo.
Isebenza kakuhle kuyilo lwabantwana lokuhlela, izikipa, ukuhombisa kunye neelogo zecandelo labantwana ezifana nevenkile yempahla.
Ulonwabo, lusondele, luguquguqukayo kunye nesitayile esicacileyo somntwana, olu hlobo lokubhala luzisa zonke kunye. Ekudalweni kwayo, ziphefumlelwe iipowusta ze-movie ze-60s ngenxa yesi sizathu sinolu hlobo olulodwa.
Phakathi kweefayile zakho uya kufumana ngaphezu kwe-175 ligatures ayincedi kuphela ukunika imvakalelo yohlobo olubhalwe ngesandla, kodwa enkosi kubo ungayidala.
Iyilwe ngokusekwe kwiisimboli, olu hlobo lochwethezo lune ukuphefumlela iintyatyambo yeeflegi ezinxantathu ezibekwa njengemihombiso kumatheko omhla wokuzalwa.
Ukuba uyayisebenzisa kuyilo lwakho, iya kusebenza ngokufanelekileyo ukuba ufuna ukwenza isimemo setheko, intengiso ye-anniversary, ukubonelela ngokuzonwabisa kunye nomoya wokuzonwabisa. Ngaphandle kwealfabhethi, olu chwethezo lukunika uluhlu lwee-doodles onokuthi uzibandakanye emsebenzini wakho.
Omnye umzekelo ogqibeleleyo we-typography yabantwana iphefumlelwe kukubhalwa kwabancinci. Yifonti enkulu ekubonelela, xa usebenza nayo, inani elikhulu leeglyphs kunye ne-ligatures ukuze ukwazi ukwenza uyilo ngesitayile sakho.
Kido, yi ifonti eyonwabisayo engena ngokugqibeleleyo kuyo nayiphi na inkxaso oyidingayo, ngenxa yenkalipho yayo emangalisayo.
Njengoko igama layo libonisa, ngu-a idonut esekwe kuchwethezo, ezo scones zimnandi ezijikelezayo ezinomkhenkce. Luhlobo oluchwethezayo olune-stroke engqindilili kunye nengqukuva kodwa ayiqhelekanga kubalinganiswa bayo, ngoko ke ivelisa amandla.
Unako sebenzisa kuyo nayiphi na inkxaso oyifunayo, ekubeni ihambelana ngokuchanekileyo, unokwenza i-textile designs, iimpahla zabantwana, izimemo, ukupakishwa, njl.
Iifonti ezilinganisa ukubhala ngesandla zidla ngokuba a ukhetho olufanelekileyo ukuba ukhangele isitayile somntwana. Banomtsalane kwaye nangaphezulu ukuba balinganisa uhlobo lokubhala olwenziwe ngumntwana omncinci.
Rocketboy, yenye yezi iifonti ezibhalwe ngesandla zabantwana, ibandakanya oonobumba abakhulu, abancinci, inani, kunye neziphumlisi. Ukuba umsebenzi wakho woyilo onobuhle bomntwana unemizobo eyonwabisayo, ungathandabuzi ukusebenzisa olu hlobo lokuchwetheza ukulugqibezela.
Sincoma ukuba usebenzise le fonti yokuzonwabisa Uyilo lokuhlela olujolise kwabancinci, kumakhadi okuzalwa okanye umzekelo kwiipowusta zabantwana. Luhlobo lokubhala olumnandi, olunolungelelwaniso olwahlukileyo lwealfabhethi.
Uya kukwazi ukusebenza zombini ngoonobumba abakhulu kunye nabancinci, kunye neCatch Feels ikuvumela ukuba usebenzise iiligatures ezincinci ukufezekisa isitayile esikhethekileyo kwindalo yakho. Ngomfanekiso omnandi kunye nemibala eqaqambileyo, uya kufezekisa uyilo olukhethekileyo lwabantwana.
Ngokuqinisekileyo uyamazi umntwana othanda iidinosaurs, kuba oku Uchwethezo oluphefumlelweyo lwe-Rex nguye wabo. Ludidi olungqindilili, olunesitayile somntwana semanuwali.
Lukhetho olufanelekileyo Uyilo lwabantwana oluphefumlelwe zezi zilwanyana zangaphambili, isebenza kakuhle kakhulu nakweyiphi na iphakathi enkosi ngokufundeka okukhulu ezibonelelwa ngobunzima bayo ababini.
Amabali entsomi amnandi
Fuente i-typography ebhalwe ngesandla enesitayile esimnandi nesimnandi. Lukhetho olugqibeleleyo lwezo ziyilo zeepowusta, iincwadi, izimemo, iingubo, ngokubanzi naluphi na uhlobo loyilo olujoliswe kwincinci yendlu.
Nge ubhalo olumdaka, sinikwa olu hlobo lokuchwetheza ilinganisa ukubhala kwebrashi ngemibala yamanzi. Unokwenza naluphi na uyilo lwabantwana olufika engqondweni yakho ngokudibanisa oonobumba abakhulu, abanobumba abancinci, ii-accents kunye nabalinganiswa abakhethekileyo.
Yiba nomfanekiso welogo okanye ikhadi lesimemo elinolu hlobo lohlobo olukhatshwa nemibala eqaqambileyo, indibaniselwano nje ewinileyo.
Njengoko igama layo libonisa, kule ndawo yokugqibela sikuzisa a i-typography emnandi ephefumlelwe zezi mveliso. Awuyi kufumana kuphela ialfabhethi ngoonobumba abakhulu kunye nabancinci, kodwa ikwabonelela ngenani elikhulu lee-icon zevector zeelekese ezahlukeneyo ukuze wongeze kwiiprojekthi zakho kwaye uzenze mnandi ngakumbi ukuba unako.
Siyathemba ukuba ufumene ifonti egqibeleleyo ukufezekisa uyilo lwabantwana olugqibeleleyo, kwaye intle. Ukuze uyilo lwakho lube lodwa, kufuneka uhlale ukhumbula ukuba zonke izinto ezenza umsebenzi oxeliweyo kufuneka zisebenze ngemvisiswano. Ukukhetha ifonti efanelekileyo kunokuba yi-icing kwikhekhe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Iifonti zabantwana ezibalulekileyo
Iiplagi ezicetyiswayo zePhotoshop